Keylogger ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ - MYSTERY ZILLION
ကျွန်တော်လဲဒီအကြောင်းအရာကို Forum တစ်ခုအနေနဲ့တင်မယ်လို့ တွေးထားတာ ကြာပြီ вЂ¦. ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လဲမအားတာနဲ့ မတင်ဖြစ်ဘူးဗျာвЂ¦. ခုတော့ မတင်လို့မရဘူးဗျвЂ¦. တော်တော်လေးကို အန္တရာယ်ပေးတဲ့ software ဖြစ်နေပြီ вЂ¦. Web တွေပေါ်မှာရော အပြင်လောကမှာပါ Keylogger Software ရလို့ ပျော်နေကြတဲ့မျက်နှာလေးတွေကို ကျွန်တော် ခုထိ မမေ့သေးဘူးဗျာ вЂ¦.
ကဲမိတ်ဆွေ вЂ¦. သင်အသုံးပြုသမျျှအကြောင်းအရာအချက်အလက်တွေကို တစ်ခြားသူက record လုပ်ထားပြီဆိုလျှင် သင်အဘယ်ကဲ့သို့ ခံစားရမည်နည်း? မိတ်ဆွေတော့မသိပါ вЂ¦. ကျွန်တော်သာဆိုလျှင် အိပ်ပျော်မည်မဟုတ်တော့ပါ вЂ¦ ငါ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်တွေထဲက သူဘာတွေများ ရယူသွားမည်နည်းဟု အမြဲတမ်းစဉ်းစားမိနေမည်သာဖြစ်သည်။
သင်လဲကြားဖူးပြီးသားနေမှာပါ вЂ¦. ထွက်နေတာလဲကြာပါပြီ вЂ¦. ဘာတဲ့ вЂ¦. Keylogger software လေးပေါ့ вЂ¦. အရမ်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ software လေးပါပဲ вЂ¦. ဒါပေမယ့် အရမ်းကိုလဲ ဒုက္ခတွေအများကြီးပေးနိုင်တဲ့ software လေးပေါ့ဗျာ ။
သင် keylogger software သွင်းထားတဲ့ ကွန်ပျူတာကို စပြီးအသုံးပြုပြီဆိုတာနဲ့ အဲဒီ software လေးက သင်အသုံးပြုသမျှကိုစတင်ပြီး မှတ်သားပြီဗျ вЂ¦. ကဲဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေ ရလာနိုင်မလဲ вЂ¦. သင် ဘယ် website တွေကြည့်ခဲ့လဲ .. သင်သူများတွေနဲ့ဘာတွေပြောခဲ့လဲ вЂ¦. သင်ဘယ် programme တွေကိုအသုံးပြုခဲ့လဲ вЂ¦. သင့်ရဲ့ mail user name တွေ password တွေ သိသွားမယ် вЂ¦ သင့်ရဲ့ mail user name တွေ password တွေ သိမှတော့ သင့်ရဲ့ mail ထဲ၀င်ပြီး လျှို့၀ှက်ချက်တွေပါ သိသွားမှာပေါ့နော် . အစုံပဲဗျာ вЂ¦. ပြောရရင်အရှည်ကြီးဖြစ်သွားမယ်။
ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုစမ်းသပ်ကြည့်တော့ သူ့ကို windows task manager ထဲမှာလဲ မပေါ်အောင်ထားလို့ရတယ် вЂ¦. Add or Remove Programs ထဲမှာလဲ မပေါ်အောင်ထားလို့ရတယ်.. နောက်ပြီးကွန်ပျူတာထဲမှာ ဒီ software ကို run ထားမှန်းလည်း သာမန်အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့လဲ သိမှာမဟုတ်ဘူး။
အရမ်းကိုကောင်းမွန်တဲ့ software လေးဖြစ်သလို ဆိုးကျိုးတွေလဲ ပေးလိုက်တာဗျာ вЂ¦. ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ mail တွေဖွင့်ကြည့်ခံရတယ် вЂ¦. သူ့ရဲ့လျှို့၀ှက်ချက်တွေ အကုန်သိကုန်တာပေါ့ вЂ¦. နောက်ဆုံးတစ်ချို့ဟာတွေဆိုရင် Internet ပေါ်မှာတောင် အတင်ခံရတယ်။
နောက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကတော့ သူ့ရဲ့ account ကို လုံး၀ (လုံး၀) သုံးလို့မရတော့ဘူး вЂ¦. Password change ခံလိုက်ရတယ်вЂ¦. နောက်မိတ်ဆွေတစ်ဦးကတော့ вЂ¦.. တော်ပါပြီဗျာ вЂ¦ ရှည်သွားလိမ့်မယ် вЂ¦. ပြောရရင်တော့ အဆိုးချည်းပဲကြားနေရတယ် ။
ကဲ вЂ¦. ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းကြမလဲ вЂ¦ ကျွန်တော်တော့အမျိုးမျိုး စမ်းကြည့်ပြီးပြီ вЂ¦ အင်း вЂ¦. သူကတော့ copy တို့၊ paste လုပ်တာတို့၊ ဖျက်တာတို့ကိုတော့ မမှတ်ဘူးဗျ вЂ¦ ဥပမာဗျာвЂ¦ Gtalk သုံးမယ်ပေါ့ဗျာ вЂ¦. ကွန်ပျူတာမှာ user name ကို ရိုက်မထည့်ပဲ သင့်ရဲ့ USB stick ကနေ သင့်ရဲ့ user name ကို copy လုပ်ပြီး user name မှာ paste ပြန်လုပ်ရင် မမှတ်ဘူး вЂ¦. ဒါပေမယ့်ဗျာ ဒါလဲမရပါဘူး вЂ¦. Screen shots ထဲမှာ သင့်ရဲ့ user name ကြီးက ပေါ်နေပြန်ရော вЂ¦. ဟူး вЂ¦ အဲ вЂ¦ ဒါပေမယ့် သူ ရှိ вЂ¦ မရှိ စစ်တာတော့ တစ်ခုရှိတယ်ဗျ вЂ¦. သူက spyware ပဲလေ вЂ¦ သူ့ကို spyware စစ်တဲ့ software တစ်မျိုးမျိုးနဲ့ စစ်လိုက် вЂ¦. တန်းကိုမိတယ် вЂ¦. ဥပမာ- spyware doctor လိုမျိုး software မျိုးပေါ့။
ကွန်ပျူတာဆရာသမားတို့ရေвЂ¦. ကိုယ်ချင်းစာစိတ်လေးတွေတော့ထားဗျာ вЂ¦. ငါ့ကို သူများက အဲဒီလိုလုပ်သွားရင်ကောဆိုတဲ့ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ပေါ့ဗျာ вЂ¦ ခု ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံက вЂ¦. တစ်ချို့သော သူတွေဟာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ လူလူချင်း မေတ္တာထားတတ်တဲ့ စိတ်တွေ မရှိကြဘူးလို့ ကျွန်တော်ထင်တယ် вЂ¦. ဆောရီးဗျာ вЂ¦ မှားသွားလို့ вЂ¦. လုံး၀ကိုမရှိတာ вЂ¦. (တစ်ချို့ကိုပြောတာနော်၊ အားလုံးမဟုတ်ဘူး) ဘယ်လိုလူမျိုးတွေလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့အားလုံးလဲ သိကြမှာပါ вЂ¦. ဒါတွေထားလိုက်ပါတော့ဗျာ ။
မိတ်ဆွေ вЂ¦ သင်ကော သင့်အကြောင်းအရာတွေကို သူများသိသွားပြီလို့ သင်ထင်နေသလားвЂ¦ ဒါမှမဟုတ် မသိနိုင်ပါဘူးဟု ပေါ့ပေါ့လေးတွေးနေသလား вЂ¦ဘယ်လုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာ၊ ကျွန်တော်တို့အားလုံး ၀ိုင်း၀န်းပြီး အဖြေရှာကြစို့ဗျာ вЂ¦ ၀ိုင်းပြီးဆွေးနွေးပေးကြပါ။
အဲဒီဆော့ဝဲကို မသုံးခင် ပိတ်လို့ မရဘူးလားဗျ။ လိုက်ရှာမယ်ဗျာ သူ့နံမည်ရိုက်ထည့်ပြီး။ တွေ့ရင် ဖျက်ပစ်မယ်:d:d:d။ အဲဒီလိုလည်း မရဘူးလားဗျ။